Chiteshi chechitima chinotyisa kwazvo muEurope chakavakirwa mukati 3 makore, pakati 1861 uye 1864. Iyo dhizaini yakagadzirirwa 9 mifananidzo inoshamisa inoshongedza chiteshi chechitima mukati uye 23 zvidhori zvinoshongedza pachiso chechiteshi. Zvidhori zvinomiririra maguta makuru eEurope iyo chitima chinobatanidza neParis.
Kupfuurisa 500,000 vafambi vanopfuura neHamburg Hbf (Hbf ishoko pfupi kuHauptbahnhof iro rinoshandura kuCentral chiteshi) chiteshi chechitima kuGermany. saka, iyo yechipiri inonyanya kubata chiteshi chechitima muEurope.
Kana urikuronga ku chitima kufamba kuenda kuGermany, unogona kunakidzwa mimhanzi yemhando yepamusoro. saka, paunenge uchitenga yekupedzisira-mineti zviyeuchidzo, kufamba zvakakosha, uye kubata kuruma kudya, unogamuchirwa kwazvo kuti uterere uye unakirwe neVivaldi's zvina Nguva.
BusiestTrainStations	Chiteshi chechitima	traintravelaustria	chitima navi France	traintravelgermany